Tuni gaddaa miti Gammachuu fakkaattii.. – Welcome to bilisummaa
Mootii kabalamuu ?
Tuni gaddaa miti
Du’aa maqaa kaasuun
Reeffa ciisa kutuun
Ololaaf hin taatuu
Maali maqaan isii
Siyaasaaf sii toltii
Mo bu’aa maalii qabdi ?
Nama haqaa taatee
Sabaaf yo hadoodde
Hama reeffaa dhiiftee
Jiraa maa hin komanne ?
Juneeydii maan abaarre
Akka nama hin beeynee
Ka argee hin dhageenyee
Mataa lafattii qabdee
Ta juneeydiin godhee
Awwaaluuf yaaluun kee
Sababa maali re ?
Nama keenna jattee
Baala irratti cabsitee ?
Mugootni dur fuutes
Sirra yo jiraate
Himadhu siif barraa
Horii lammii baasaa
Maqaa kee sii binnaa
Maqaan baduu manna
Mataan baduu wayyaa
If dhaamotuu dhiisi
Dhugaa jirtu baasi
Badaan badaa jachuun
Salphina hin qabduu
Guyyaaf baraan wajji
Gocha saa nuu himi
Yoo kiin nuuf barreeysi
Seenaaf ol kaayyannaa
Ittiin wal gorfannaa
Mootii qabna janna
Previous MAA DHUGAA ITTIN HIMNE?
Next Addunyaa qaroomtee irraa booda hafnee ,osoo afaan qabnuu dubbachuu dadhabnee…